News - Amarka Dayactirka Daahida ee Nalka Howlgalka
Amarka Dayactirka Lahaaday ee Iftiinka Shaqeynta
Markay macaamiisha ajaanibta ahi dhahaan weligay maan iibsan nalkaaga shaqada, tayadiisu miyaa lagu kalsoon yahay? Mise waad iga fogtahay. Maxaan sameeyaa haddii ay jirto dhibaato tayo leh?
Dhamaan iibka, waqtigan, waxay kuu sheegi doonaan in alaabtayada ay yihiin kuwa ugu fiican. Laakiin miyaad runti aaminsan tahay?
Maaddaama aan ahay soo saare xirfadle ah oo nalka hawlgalka oo si qoto dheer ugu lug lahaa warshadaha caafimaadka muddo 20 sano ah, waxaan kuu sheegi karnaa xogta ammaanta weyn ee isticmaalaha gudaha iyo dibaddaba, fadlan nagu kalsoonow.
Dhowr bilood ka hor, waxaan ka helnay emayl macaamiil. Macaamiilku wuxuu iibsaday nalkeena nalka ee shaqeynaya 2013. Tan iyo markaas, ma jirin wax codsi dayactir ah.
Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah nolosha adeegga guddiga PCB dhab ahaantii waxay ku dhowdahay xadka, waxay go'aansadeen inay noo qoraan qalab cusub oo aan ku hagaajino.
Laga soo bilaabo 2013 ilaa 2020, waxaan sugeynay amarkan dayactirka muddo 7 sano ah.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno emaylkan. Waagii hore, waxaan marwalba u hoggaansameynay khadka tayada oo waxaan ku dadaalnay inaan sameyno alaab tayo sare leh. Waxaan si joogto ah u cusbooneysiinnaa qaabdhismeedka wax soo saarka iyo naqshadeynta annaga oo aan ku lug lahayn dagaallada qiimaha. Maalmahan, badeecadeenu macaamiil ayaa adeegsanayay sannado badan. Hada macaamiisha wali wey iibsanayaan agabyada waxayna sii wadaan adeegsigooda. Waa ku filan tahay in la arko in joogtayntu ay macno weyn leedahay.
Shiinaha, waxaan leenahay macaamiil badan oo aaminay tayadeena si aad ah. Ka dib iftiinkayaga shaqeynaya ayaa gaboobaya, marka aan iibsaneyno nal cusub oo shaqeynaya, wali waxay mudnaan siinayaan sumadeena. Ama, markii isbitaalkii hore u guuro goob cusub, wali waxay na weydiinayaan inaan ka caawinno inay ka saaraan laydhkii hore ee hawlgalka dibna ugu cusbooneysiiyaan cusbitaalka cusub.
Waan ku faraxsanahay taageerada adag ee adeegsadayaashan, waxaana hubaal ah inaan taageeri doonno ruuxda khushuucsan, si taxaddar leh u dhageysan doonno baahiyaha macaamiisha, sii wadno kor u qaadista alaabada, iyo inaan la jaanqaadno waqtiyada.